Andrianoelison José : « Misy kajikajy politika « | NewsMada
Andrianoelison José : « Misy kajikajy politika «
« Kajikajy politika ny fijeriko azy », hoy ny minisitry ny Fiompiana sy ny fambolena teo aloha, tamin’ny Repoblika II, Andrianoelison José na José Kely, momba ny fikasan’ny fitondrana amin’izao fotoana izao hanitsy ny lalàmpanorenana.
Manana safidy ny filoha Rajaonarimampianina, raha tena te hitana ny teny nomeny. Na mandresy lahatra ny mpanao politika rehetra izy hoe: tombontsoantsika rehetra io fikitihana ny lalàmpanorenana io. Amin’izay fotoana izay, angamba, mety hamaly ny mpanao politika sasany hoe tsy matoky ny fitondrana intsony hitantana ny fifidianana manaraka.
Koa raha izay fanitsiana lalàmpanorenana izay no hatao: eny àry fa halavaina ny fe-potoam-piasan’ny filoha, fa tsy izy intsony no mitantana ny fifidianana manaraka eo.
Misy ny andininy sasany tsy ampiharina amin’ny lalàmpanorenana
« Misy koa andininy sasantsasany amin’ny lalàmpanorenana, izay tsy mihatra na tsy azo , fa tsy vitan’ny fanjakana ny mampihatra azy », hoy Andrianoelison José. Raha ny marina amin’izao fidiran’ny mpianatra izao, ohatra: tsy tokony hisy olona mandoa vola na iraimbilanja aza amin’ireny sekoly fanabeazana fototra tantanin’ny fanjakana ireny. Satria izay no voasoratra ao amin’ny lalàmpanorenana. Hokitihina koa izany? Tokony hokitihina satria tsy vitan’ny fanjakana, ary tsy manana vola amin’izany isika izao. Soa ihany, te hampianatra ny zanany ny ray aman-dreny, mandoa vola ihany na sahirana aza.
2 réponses à "Andrianoelison José : « Misy kajikajy politika « "
Faralahy 12/10/2017 à 11:05
Ny lojika dia mampiseho fa tsy voatery hitovy hevitra daholo ny olona; na ny mpisehatra politika na ny vondron’olona samihafa na ny olompirenena aminny ankapobenyFombanjavatra izany fa na tiana na tsy tiana, ny marina dia tokana ihany.Raha ny voalaza eto dia manaiky aho fa marina loatra satria io fitongilanana io no efa nahafatiantoka antsika hatramin’izay.Aoka hifanarahana ny fanapahana eto amin’ny Firenena dia handroso isika satria efa latsaka anaty lalina loatra ary tsy misy fifampatokisana intsony.
RAZAFINDRALAMBO Y. Sabas 20/10/2017 à 11:20
Ny ahy indray dia tsotra ihany: Ataoko hoe nianatra ireo mpitondra ireo nefa toa tsy nianatra ihany koa satria mihevitra ny Malagasy dondrona. Ianareo izay mitondra ity Madagasikara malalanay ity dia tokony ahafantatra fa misolotena ny vahoaka Malagasy fotsiny ianareo @ fifandraisana sy andraikitra maro isan-karazany na ato anatiny na any ivelany, fandaminana iraisan’izao tontolo izao izany satria raha ny vahoaka an-tapitrisa tsy afaka hanatanteraka asa na hamita iraka fa tsy maintsy mifidy olona hisolo tena azy ireo hanao izay tokony ataony rehetra. Noho izany n’inon’inona zavatra tiana hatao eto @ Firenena dia tsy maintsy hieràna @ vahoaka aloha satria izy no tompon’io fahefana nomena anareo io. Misy mantsy ao @ fitondrana tsy mahay an’izany fa faly nahazo toerana fotsiny hany ka mihevitra ho tompon’ity Madagasikara ity ho toy ny fanànany manokana na ho fanànam-pianakaviany.